လူ့ သဘော လူ့ မနော အရ ပြောရရင်တော့ တန်ဖိုးကြီးလေ အရည် အသွေး ကောင်းလေ လို့ ထင်မှတ် တတ်ကြ ပါတယ် ။ ပစ္စည်း ၂ ခု ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် ကြမယ် ဆိုရင်ပဲ ဈေးပိုကြီး တာ ပိုပြီး အရည် အသွေး ကောင်းတယ် လို့ ထင်တတ် ကြပါတယ် ။ ဒါမျိုး က ယေဘုယ အားဖြင့်တော့ ဟုတ်မှန် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တခါ တလေ မှာလည်း ဈေးပိုကြီး တိုင်း မကောင်းတတ် တာမျိုးတွေ ရှိနေ ပြန်ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် အသွေး အသား နဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ လူသားတွေ မှာ ဆိုရင်ပေါ့ . . .
ချဲလ်ဆီး ဟာ နယ်သာလန် ကလပ် အိုင်ယက်စ် အသင်း ရဲ့ တောင်ပံ ကစား သမား ဟာကင် ဇီယက်ချ် ကို လာမယ့် နွေရာသီ မှာ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိ သွားခဲ့ ပါပြီ ။ မော်ရိုကို ကစား သမား အတွက် ချဲလ်ဆီး တို့ ပေးရမှာက ပေါင် ၃၈ သန်း တည်းပါ ။ ဒါက သိပ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင် မှု တစ်ခု ပါပဲ ။
ဇီယက်ချ် ဟာ ချဲလ်ဆီး ကို ရောက်မလာ သေးပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဂုဏ် သတင်းတွေ ကတော့ အိုင်ယက်စ် နဲ့ အတူ ကျော်ကြား ထားပြီး ပါပီ ။ မနှစ် က ချန်ပီယံ လိဂ် မှာရော ဒီနှစ် ပြိုင်ပွဲ မှာပါ ဇီယက်ချ် က တောက်ပ နေခဲ့ပြီး ဂိုးတွေ သွင်း ၊ ဂိုးတွေ ဖန်တီးပေး ထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို အဖိုးတန် ကစား သမား အတွက် ချဲလ်ဆီး တို့ ပေးခဲ့ ရတာက သန်း ၄၀ တောင် မပြည့် ခဲ့ ပါဘူး ။
အခု လက်ရှိ ဈေးကွက် မှာ ငွေကြေးက အရမ်းကို ဖောင်းပွ နေပါတယ် ။ အလယ် အလတ် အဆင့် ခြေစွမ်း ထက် မပိုဘဲ တစ်ရာသီ လောက် ကောင်းအောင် ကစားပြလိုက် တာ နဲ့ ဈေးက သန်း ၅၀ လောက် အထိ ရောက် သွားတဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေ ပါပြီ ။ ဒီ အချိန် မှာ ဇီယက်ချ် အတွက် ၃၈ သန်း ဆိုတာ က သိပ်ကို တန်လွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူ ငြင်းနိုင် မှာလဲ . . . .
ဇီယက်ချ် က ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ မကစားရသေးလို့ ပရီးမီးယားလိဂ် နဲ့ အံဝင် မလား ဆိုတာ မသိရသေး ပါဘူး . . . ဟုတ် ပါတယ် ။ ဒါအမှန် ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အခု ပြောနေတာ က ဈေးနှုန်း အကြောင်းပါ ၊ ခြေစွမ်း ကတော့ ကစား သမား လာမှ ပဲ ဆုံးဖြတ် လို့ ရပါလိမ့်မယ် ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၃၈ သန်း ဆိုတာ ပစ်လိုက်ရရင်တောင်မှ သင့်တော်တဲ့ ဈေးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဈေးကြီးတိုင်း အသုံးမတည့် ပါဘူး ။ ငွေတွေ ပုံပေးခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမပြုခဲ့သူတွေက အများကြီး ပါ ။ ဘယ်သူတွေများ ဖြစ်မလဲ . . . သွားကြည့်လိုက်ကြရအောင် . . .
၁ ။ နီကိုလပ်စ် ပီပီ ( အာဆင်နယ် )
ပေါင် သန်း 70 ကျော် ပေးထားတဲ့ ကစား သမား ဆီက အာဆင်နယ် တို့ ဘာတွေ ရထားပြီး ပြီလဲ ။ အာဆင်နယ် ပရိသတ် တစ်ယောက်ကို ဒီမေးခွန်း သွားမေးမိရင်တော့ သူ့ဆီကနေ စိတ်ပျက်စရာ အဖြေတစ်ခုပဲ ကြားရမှာပါ ။ ပီပီ ဟာ အာဆင်နယ် နဲ့ တစ်ရာသီ မပြည့်သေးပါဘူး ၊ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပေါင် သန်း 70 ကျော်ပေးရတဲ့ သူကို အသားကျဖို့ တစ်ရာသီ ထားပေးရမယ်ဆိုတာကတော့ သိပ် မဟုတ်သေးပါဘူး ။
၂ ။ ကီပါ အရစ်ဇာဘလာဂါ ( ချဲလ်ဆီး )
ဈေးကြီးပေးရတိုင်း မကောင်းဘူးဆိုတာကို ချဲလ်ဆီး တို့ ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူး ပါတယ် ။ ယူရိုပါလိဂ် ချန်ပီယံ ဂိုး သမား ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ကီပါ ရဲ့ လက်စွမ်းတွေကို ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်တွေ ကိုယ်တိုင် မကြိုက်ခဲ့ ပါဘူး ။ ဒီလို အနေအထားရှိတဲ့ ဂိုး သမား အတွက် ပေါင် သန်း 70 ကျော် သုံးပြီး စံချိန်ချိုးပြ ခဲ့တာ ကို ရင်နာ လို့ မဆုံး ဖြစ်နေ ကြမှာ သေချာပါတယ် ။
၃ ။ အယ်ဗာရို မိုရာတာ ( ချဲလ်ဆီး )
ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့ မတန်ဆုံး ချဲလ်ဆီး ကစား သမားက ကီပါ လို့ ထင်နေရင်တော့ မိုရာတာ က စပိန် ကနေပြီး ခိုးရယ် နေမှာပါ ။ ကျောနံပါတ် ၉ ကြီး ဝတ်ပြီး အစောပိုင်းမှာ ခေါင်းတိုက် ဂိုးတွေ သွင်းပြ ခဲ့တဲ့ မိုရာတာ ဟာ ပေးရတဲ့ ဈေး ရဲ့ ထက်ဝက် လောက်တောင် အစွမ်းမပြ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
၄ ။ ဆီဘက်စတီယန် ဟေလာ ( ဝက်စ်ဟမ်း )
ဖရန့်ဖွတ် မှာ လူကာဂျိုဗစ် နဲ့ အပြိုင် ဂိုးတွေ သွင်းပြ ခဲ့တဲ့ လူထွားကြီး ကို ဟမ်းမားတို့ သန်း ၅၀ နီးပါး ပေးပြီး ခေါ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ၂၄ ပွဲမှာ ၆ ဂိုးပဲ သွင်းခဲ့ပြီး မှန်းချက် နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ခဲ့ ပါဘူး ။ ဝက်စ်ဟမ်း အတွက်တော့ အဆိုးရွားဆုံး ရင်းနှီး မြှပ်နှံမှု ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
၅ ။ ဖရက်ဒ် ( မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် )
လက်ရှိ မှာ ဖရက်ဒ် ကို မရှိ မဖြစ် သုံးနေ ပါတယ် ။ ဘရာဇီး သား ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှု ကြောင့် တိုးတက်မှု ရှိလာတယ်ဆုပေမယ့် ရှက်တာဒိုးနက် တုန်းက အဆင့်မျိုး မဟုတ်သေး သလို ပေါင် 57 သန်း ဆိုတဲ့ တန်ကြေး နဲ့ ချိန်ထိုး ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း မတန်သေးတာကို တွေ့ရမှာပါ ။
၆ ။ ဂျိုးလင်တွန် ( နယူးကာဆယ် )
နယူးကာဆယ် အသင်း ဟာ သွင်းဂိုးတွေ ကို အာမခံချက် ပေးနိုင်မယ့် တိုက်စစ်မှုး ကို ရှာဖွေ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဂျိုးလင်တွန် ကို တွေ့ရှိ အပြီး မှာတော့ ဒါဟာ သူတို့ ရှာဖွေ နေတဲ့ အဖြေဖြစ်မယ် လို့ ယူဆပြီး ပေါင် သန်း ၄၀ ကို ရင်းနှီး ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ အတွက် သူတို့ ပြန်ရ ခဲ့တာ က သွင်းဂိုး ၁ ဂိုး တည်းပါ ။
ဒီ ကစား သမားတွေ ကတော့ ပေးရတဲ့ တန်ကြေး နဲ့ ပြန်ရတဲ့ ခြေစွမ်း မကိုက် ညီခဲ့ကြသူတွေ ပါပဲ ။ နောက်ထပ် ဖော်ပြ ပေးလို့ ရတဲ့ ကစား သမားတွေ ရှိပါသေးတယ် ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါင် ၃၈ သန်း ဆိုတာ ကတော့ ပေးပျော်တဲ့ ပမာဏ လို့ ပဲ ဆိုရမှာပါ ။
သွင်းဂိုးတွေ ပျောက်ဆုံး နေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနေတဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းဖော်ဟောင်း နှစ်ဦးကို ညှော်လိုက်တဲ့ ဇလာတန်